Umzimveliso woluvo lwegesi lwe-CO2, abaXhobisi-abavelisi baseChina i-CO2
I-Carbon Dioxide CO2 NDIR I-Detector yeGesi yokuHlola uMgangatho woMgangatho woMoya-SDG11DF42
Intsapho ye-SDG11DF42 ye-sensor ye-thermopile ehlanganisiweyo ye-NDIR (ukufunyanwa kwegesi engafakwanga infrared) sisixhobo esine-sensor yesixhobo se-thermopile sensor esinamandla ombane ngokuthe ngqo kumandla ombane we-infrared (IR). I-infrared band band yokupasa isihluzi phambi kwesenzi esenza ukuba isixhobo sinobuchule ekujoliswe kuyo. Ijelo lesalathiso linikezela ngembuyekezo kuzo zonke iimeko ezifanelekileyo.
I-SDG11DF42 equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip ebonisa uvakalelo olufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.
I-ASIC AFE Idityanisiweyo ye-CO2 NDIR yegesi yeSensor yeNdawo ezimbini zeCarbon Dioxide Analyzer-SDG11DF42G1
Intsapho ye-SDG11DF42G1 ye-sensor ye-thermopile ehlanganisiweyo ye-NDIR (ukufunyanwa kwegesi engafakwanga infrared) sisixhobo esine-sensor yesixhobo se-thermopile sensor esinamandla ombane ngokuthe ngqo kumandla ombane we-infrared (IR). I-infrared band band yokupasa isihluzi phambi kwesenzi esenza ukuba isixhobo sinobuchule ekujoliswe kuyo. Ijelo lesalathiso linikezela ngembuyekezo kuzo zonke iimeko ezifanelekileyo.
I-SDG11DF42G1 equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip enobuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. I-chip ye-ASIC AFE (i-Analog Front End) idityaniswe ne-sensor ye-thermopile, ebonelela nge-1000 inzuzo yesiphumo esincinci sevolopile sensor. Igalelo le-voltage ekhutshwayo yongezwa kwigalelo lenzwa. Umbane wokuphuma kwoluvo unokuguqulwa ngokuthe ngqo yi-ADC, ephelisa ngokuthe ngqo iZero-Drift amplifier kunye neDC-DC yesekethe. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.
I-NDIR CO2 iCarbon Dioxide yegesi yeSensor eyi-Smart yokuGada uMgangatho woMoya-we-SSG11DF42
Intsapho ye-SSG11DF42 ye-sensor ehlangeneyo ye-thermopile ye-NDIR (i-infrared gas detection) iyisistim esisodwa se-thermopile sensor esine-signal signal ye-output ngokuthe ngqo kwi-infrared (IR) yamandla emitha. I-infrared band band yokupasa isihluzi phambi kwesenzi esenza ukuba isixhobo sinobuchule ekujoliswe kuyo. I-SSG11DF42 equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip enobuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.
I-NDIR Inzwa yeRhasi yeShaneli enye yeCandelo le-ASIC AFE Idibeneyo yeCarbon Dioxide CO2 yeGet Detector-SSG11DF42G1
Intsapho ye-SSG11DF42G1 ye-sensor ye-thermopile ehlanganisiweyo ye-NDIR (ukufunyanwa kwegesi engafakwanga infrared) sisixhobo esinye se-thermopile sensor esinamandla ombane alinganayo ngokuthe ngqo kumandla ombane we-infrared (IR). I-infrared band band yokupasa isihluzi phambi kwesenzi esenza ukuba isixhobo sinobuchule ekujoliswe kuyo.